Ch 15 John – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Jaona / Ch 15 John
15:1 "Izaho no tena voaloboka, ary ny Raiko no mpamboly ny.
15:2 Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa voa, dia hanaisotra. Ary samy izay manao mamokatra, dia hanadio, ka mba hamoa bebe kokoa.
15:3 Madio ianao izao, noho ny teny izay nolazaiko taminareo.
15:4 Tomoera amiko, ary Izaho ao aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy, raha tsy miray amin'ny voaloboka, dia tahaka izany koa ianareo tsy afaka, raha tsy miray amiko.
15:5 Izaho no voaloboka; ianareo no sampany. Na iza na iza mitoetra ao amiko, ary Izaho kosa ao aminy, mamoa be. Fa raha misaraka amiko, ianao no mahay manao na inona na inona.
15:6 Raha misy tsy miray amiko, dia matiantoka, izany izy, tahaka ny sampana, dia halazo, ary ireo dia hanangona azy sy namoaka azy tao anaty afo, ary Izy ary mandoro.
15:7 Raha miray amiko, ary ny teniko mitoetra ao anatinareo, dia afaka mangataka na inona na inona ho, ary izany dia hatao ho anao.
15:8 ao amin'io, ny Raiko no omem-boninahitra: fa hamoa voa be dia be ka ho tonga mpianatro.
15:9 Tahaka ny nitiavan'ny Ray Ahy, toy izany ny nitiavako anareo. Hitoetra amin'ny fitiavako.
15:10 Raha mitandrina ny didinao, dia hitoetra amin'ny fitiavako, fotsiny araka izay efa nitandrina ny Ray fitsipika ary ny itoerako amin'ny fitiavany.
15:11 Izany teny izany efa nolazaiko taminareo, ka ny fifaliako mba ho ao aminareo, ary ny fifalianareo mba ho tanteraka.
15:12 Izany no didy: fa ny mba hifankatiavanareo, tahaka ny nitiavako anareo.
15:13 Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao: dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany.
15:14 Hianareo no sakaizako, raha manao izay hampianatra anareo.
15:15 Dia intsony hoe mpanompo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ny Tompo manao. Fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria ny zava-drehetra na inona na inona izay efa reko avy tamin'ny Raiko, Izaho no nanao nambarako taminareo.
15:16 Tsy hianareo no nifidy ahy, fa Izaho no nifidy anareo. Ary efa nanendry anao, mba handeha sy hamoa, ary toy izany koa fa ny vokatra mba haharitra. Ary na inona na inona efa nangataka ny Ray amin 'ny anarako, Izy no hanome anareo.
15:17 Izany no andidiako anao: fa ny mba hifankatiavanareo.
15:18 Raha halan'izao tontolo izao ianareo, fantatrareo fa izaho efa halany talohanareo.
15:19 Raha ianao no 'izao tontolo izao, izao tontolo izao ho tia ny ny azy. Na izany aza tena, ianao dia tsy naman'izao tontolo izao, fa izaho efa nifidy anareo avy tamin'izao tontolo izao; noho io, halan'izao tontolo izao ianareo.
15:20 Tsarovy ny hoe: fa Izaho efa nilaza anao: Ny andevo tsy lehibe noho ny Tompo. Raha nanenjika ahy, izy dia hanenjika anareo koa. Raha efa nitandrina ny teniko, dia hitandrina ny anareo koa.
15:21 Fa izany rehetra izany dia hataony aminareo noho ny anarako, satria tsy mahalala Izay naniraka Ahy.
15:26 Fa rehefa tonga ny Advocate izay, Izay hirahiko ho aminareo avy amin'ny Ray, ny Fanahin'ny fahamarinana Izay mivoaka avy amin'ny Ray, dia hanatitra ahy fijoroana ho vavolombelona momba ny.
15:27 Ary izao no atero ho vavolombelona, satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. "